Dowladda Somalia iyo Azerbaijan oo wada hadal gaar ah yeeshay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Dowladda Somalia iyo Azerbaijan oo wada hadal gaar ah yeeshay
Dowladda Somalia iyo Azerbaijan oo wada hadal gaar ah yeeshay
Wasiirka Arimaha dibadda ayaa Safiirka dowladda uga warbixiyay xaaladda dalkiisa gaar ahaan deegaannadii dhowaan dagaaladu ku dhexmareen Azerbaijan iyo Armenia, wuxuuna Wasiirka ka mahadceliyay taageerada dowladda Somalia.
“Annaguna dhankayaga waxaanu uga mahad celinay sida fiican ee uu noo soo dhoweeyey. Waxaan u gudbinnay fariinta dawladda Soomaaliya ee ku aaddan xidhiidhka labada dal oo ah: Walaaltinimo, isqaddarin iyo iskaashi isu dheelitiran. Waxaan xusnay xidhiidhka soojireenka ah ee walaaltinimo iyo dhaqan ee labada dal ka dhexeeya” ayuu yiri Safiirka Soomaaliya ee Turkiga.
Ugu dambeyn Safiirka Soomaaliya ayaa waxaa uu qoraalkiisa ku sheegay in dib u soo celinta xiriirka dhexeeyay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Azerbaijan uu fursad u yahay labada dal.
Maqaal horeHirshabeelle iyo KGS oo bedelay xubnihii la soo eedeeyay ee ku jiray Guddigii doorashada
Maqaal XigaWafdi saaka gaaray Magaalada Baladweyne iyo ujeedka safarkooda